The Best Zvinhu Kuitira In London And How To Get There | Save A Train
musha > Chitima Kufamba UK > The Best Zvinhu Kuitira In London And How To Get There
Panyaya kushanyira kuEurope misoro dzakakurumbira, London hadzina kwenzira dzose nzvimbo kuti chido mazita uye pane zvinhu zvakawanda zvokuita muLondon. Zvinofanira refu, nhoroondo dzakaitika; varipo dzakanaka uye zvinotyisa; uye pane zvakawanda zvinhu ikoko. Ungave uri nyore kuenda mushanyi uyo anoda kuziva vemunzvimbo tsika nemagariro, kana ane mushingi vachitsvaka mafaro, London ane chinhu zvakachengeterwa iwe.
Ehe saizvozvo, kunze vachiziva zvokuita muLondon, zviri zvinokoshawo kufunga kunze logistics okufamba yako. Kudzokera ikoko nechitima chimwe chezvinhu zvakasikwa mikana, kunyanya kana uri kufamba kubva mumaguta makuru European kufanana Paris, Amsterdam, kana Berlin. Heuno muchidimbu London mabasa uye zvitima kuti achakubatsira kuronga zororo renyu:
Zvinhu zvedu Favorite Kuita muLondon
Mune rimwe guta sezvo guru sezvo London, kuderedza pasi pamazita mabasa mashoma kusarudza kwakaoma zvisingaiti. Haumboiti vachaona ose zvisakamboonekwa uye kubata vose zvechokwadi London zvakaitika panguva imwe kushanya. Ndicho chikonzero tichifanira dzinorumbidza kuisa zvaunokoshesa pachine.
Nokuti vaya vanotarisira Zvinhu Kuitira muLondon kuti vane ukama kunotenga, Misika siyana achava anoratidza hwako kushanya. Uri kutsvaka zvechokwadi, zvokudya zveko? Ongorora Borough Market uye Mharidzo ayo gastronomic zvinofadza, kana kudya mumwe mumaresitorendi pedyo. Kana uri zvakawanda zviri kumunetsawo vamwe dhipatimendi chitoro kunotenga, Liberty inzvimbo huru. Nerumwe, enda vachivhima vamwe Antiques tonhorera pa Portobello Road Market.
Kana rwendo rwako London ane zvakawanda hunhu ane dzidzo, kushanyira dzimwe tsika hotspots muguta. Kupinda rokuvakazve Shakespeare raMwari Globe kudzidza pamusoro Shongwe London, uchawana zvakawanda zvokuita. Tinoda vanotiwo kunakidzwa makanaka akararama panguva Tate Modern pamusoro South Bank, uyewo kushanyira Southbank Center.
Utrecht kuLondon Zvitima
Strasbourg kuLondon Zvitima
Kuwana kuLondon nechitima kubva Paris, Amsterdam, uye Berlin
Unogona kusvika London kubva Paris, Amsterdam, uye Berlin nyore Via Eurostar, Intercity uye Thalys nezvitima. Vamwe kutanga dzokugara achava zvoga nzira yokusvika London kupfuura vamwe. Semuyenzaniso, unogona kukwira Eurostar mukuru-nokukurumidza chaipoipo kudzidzisa kuLondon kubva Paris, uye imomo zvishoma pamusoro maawa maviri nehafu.
Panyaya kufamba kuLondon kubva Amsterdam uye Berlin, From Amsterdam, unogona kutora Eurostar ngaatungamirire kana imwe nzira yakanaka kuna kutanga kusvika kweBrussels Via Thalys uye ipapo chaienda Eurostar muna kweBrussels kuLondon. The rwendo Zvinotora anenge mana maawa kuti nzira uye ndiyo uchitsanya nzira kusvika London kubva Amsterdam nechitima.
Kusvika UK guta kubva Berlin nechitima hungada mbiri dzokuchinja. Chokupedzisira cherwendo rwendo zvakafanana kubva Amsterdam, uye ipapo achikwira Eurostar. zvisinei, Munogonawo kudzidzisa kufamba kubva kubva Berlin kusvikira Cologne, apo iwe wakaramba kukwira chitima kuna kweBrussels. Ndizvo ari uchitsanya chitima rwendo kubva Berlin kuLondon uye anotora zvishoma ipapo 10 maawa uye unogona kuita zvose zvinhu zvawakadzidza pamusoro pezvinhu kuita muLondon.
Akagadzirira Get kuLondon?
Kana une yakasarudza chii chaunofarira zvinhu zvokuita muLondon achava, unofanira chete kuti rwendo! Kudzokera ikoko nechitima zviri nyore, saka endai uye bhuku zvigaro zvenyu tarenda pazororo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#traveluk europetravel London Train Travel ukra